YAANYO "MUCJISO RASPBERRY": SHARAXAAD IYO ASTAAMAHA BEERASHADA - BEER CAGAARAN
Taxanaha "Mirpberry Miracle" ayaa lagu soo bandhigay shaybaarrada hay'adaha aan dawliga ahayn ilaa 12 sano. Taas awgeed, mustaqbalka jecel ee dhammaan growers growers. Haddii aad sidoo kale xiisaynayso Yaan Mirp Raspberry Miracle, ee maqaalkan waxaad ka heli doontaa sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan, iyo sidoo kale sifooyinka tignoolajiyada beeraha.
Tilmaamaha iyo astaamaha "Mirim Miracle"
Tamaandho "Mucjiso raspberry" waa mid aad u jilicsan, oo leh saxarka firfircoon ee midabka qaraha, macaan iyo casiir leh. Midabka maqaarka midabka casaanka, taas oo ay magacooda ku heleen. Taxanaha "Mirpberry Miracle" taxane ah ayaa loo aqoonsan yahay sida ugu fiican ee suuqa khudradda beerta. "Mucjiso raspberry" waa noocyo kala duwan oo yaanyo ah, oo ay soo saareen jinsiyado Ruush ah oo ka socda ururka cilmi baarista iyo wax soosaarka beeraha "Gardens of Russia" 1990kii. Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah Beelaha ugu fiican ee shirkadda, ee la soo dhaafay.
Tani waa noocyo kala duwan oo yaanyo ah oo lagu kori karo labadaba aqalka dhirta lagu koriyo iyo berrinka bannaan. Intaa waxaa dheer, waxay aad u adkaysi u dabaylo goor dambe. A taxane ah yaanyo kuwaas oo helay bilad dahab ah 2014. Laga soo bilaabo wakhtigaas, yaanyo kuwan oo loo yaqaan "Miracle Golden Crimson."
Waa muhiim! Miro la soo goostay waa in lagu kaydiyaa meel qabow oo mugdi ah. Heerkulka hawadu waa inuu u dhexeeyaa 5-12 ° S, qoyaanku waa inuu ahaado 80%. Ugu wanaagsan ee dhan, yaanyada "Mucjisada Dambiga" waxaa lagu keydin doonaa baakidhka laga samaysan yahay qoryaha ama balaastik. Iska ilaali inaad xakameyso.
Noocyo yaanyo casaan ah "Crimson Miracle" waxaa lagu kala soocayaa sifooyinka soo socda:
Noocyo heer sare ah ayaa gaari kara laba mitir haddii ay ku koraan xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo;
Jiilka koowaad ee yaanyada ayaa koraaya kan ka sii weyn, iyo hal miro ayaa gaari kara tiro dhan 1 kg. Goosashada dheeraad ah waxaa soo bandhigi doona yaanyada yaryar - 300-500 g;
ee yaanyada kala duwan, maqaarka waa siman oo joogto ah, sidaa darteed midhaha miraha ma xoqin xitaa inta lagu jiro xilliga qalalan iyo waraabiyo xad-dhaaf ah;
waxay muujiyaan sifooyinka wanaagsan iyo xasilloonida xasilloonida. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku kaydiso yaanyada foomka asalka ah saddex bilood.
dhadhanka ayaa ku habboon ilaalinta;
laga bilaabo muuqaalka caleemaha koowaad si loo helo goosashada buuxda waxay qaadataa shan bilood.
Ma taqaanaa? Habka ugu waxtarka leh ee loo dardargelinayo tufaaxa tamaandhiga ah waa inay ku wada duubaan muuska iyo tufaaxyada soo saaro etylene, taas oo kicinaysa geedi socodka Bisaylkiisa.
Tamaandhada "Crimson Miracle" waxaa si caadi ah loo qaybiyaa sadex nooc oo kala duwan oo noocyo kala duwan ah.
Taxanaha ugu horeeya "Crimson Miracle" waxaa ka mid ah noocyada soo socda:
Tamaandhada "Crimson Sunset" - Kuwani waxaa lagu soo xulay midho weyn oo miisaankiisu yahay 500-700 g mid kasta, oo leh dhadhan cajiib ah.
"Abuurka Berry" - Tamaandho ah oo ah shimbir raspberry dhalaal ah leh aan caadi ahayn, laakiin dhadhan wanaagsan. Miisaanka miisaanka wuxuu kudhowaad yahay qiyaastii 500 g.
Tamaandho "khamriga raspberry" - Tani waa noocyada ugu caansan ee taxanaha oo dhan. Tamaandhada laftoodu maaha sida kuwa kale, qiyaastii 400 g. Waxay jecel yihiin beeraleyda si ay u soo saaraan dalag aad u farabadan. Ka taxadar noocyada kala duwan ee yaanyada taxane ah "khamriga Raspberry" iyo hubi inaad go'aansato beeritaanka.
"Bright Robin" - Tamaandho leh qajiyo dhirbaaxo leh oo aan caadi ahayn ee yaanyada. Midhaha ayaa ah mid dhalaalaya, casiir leh iyo fareem, gaaraya 700 g oo miisaanka.
Tamaandhada "Jasiiradda Raspberry" - noocyada ugu wax soo saar badan ee ku guuleystay abaalmarino badan, sidaas darteed waxaan jeclaan lahaa in aan bixiyo sharaxaad faahfaahsan oo dheeraad ah. Miraha waa wareegsan, si caddaalad ah - ilaa 600 g, oo leh hanti raspberry-casaan badan. Hoos yar, laakiin maqaarka weyn ee maqaarku waxa uu jiraa casaan leh, saxaro sonkor leh oo dhalaalaya afka. Seeds in yaanyada yar. Iyada oo ay ku jirto maadooyin badan oo sonkor ah iyo walxaha qalalan, yaanyada u bislaadaan macaan leh dhadhan malab oo dhalaalaya iyo calaamadaha miro. Yaanyadaas waxaa la cunaa caruur leh raaxo.
Taxanaha labaad ee "Crimson Miracle" waxaa matala noocyo kala duwan:
"Jacaylka Raspberry" - noocyo kala duwan oo u adkeysan kara heerkulka xad-dhaafka ah iyada oo aan lumin dhadhanka. Miraha yar yar - ilaa 250 g, waxay ku koraan dhowr burush oo kasta.
"Crimson Bison" - oo la mid ah "Jilaalka Crimson" ee taxanaha koowaad. Waxay bixisaa goosashada wanaagsan, marka laga reebo aan qabyo ahayn. Tamaandho koraan ilaa 0.5 kg, qaabka istiraatiijiga ah ee saxda ah. Oo waxaas oo dhanna waa geed yar yar oo ah 70 cm.
"Riyada Rigoorada" - waxay u dulqaadataa xaaladaha cimilada, bixinta goosashada wanaagsan. On a baadiyaha mitir koraan yaanyada miisaankeedu yahay ilaa 700 g.
"Crimson Coveted" - baadiyaha ballaaran oo xoog leh oo badan oo yaanyo ah. Waxaa fiican in aan koraan iyada oo aan taageero, sababtoo ah waxay jebin doontaa inta lagu jiro muddada fruiting. Miraha hooska jilicsan ee 600 g oo kasta.
"King Crimson" - Barkad weyn oo leh yaanyada lakulmay. Miraha waa kuwo waaweyn, dherer hoose, oo culeyskiisu yahay 400 g waxaana lagu ururiyaa burushyada. Haysataa tayada dhadhanka ee cajiibka ah waxayna dhali kartaa mid ka sii badan sidii caadiga ahayd.
Taxanaha saddexaad "Crimson Miracle" waxaa ka mid ah noocyada soo socda:
"Xasaasiyad Raspberry" - kala duwan oo aan kakoobaneyn soo kordhaya, oo gaari dherer ahaan 1 mitir. Miraha fareeshka iyo sonkorta oo miisaankeedu yahay 0.5 kg.
"Muuqaalka raspberry" - si habboon u dulqaadashada dhibcaha heerkulka iyo ma yareeyo fruiting xilliyada roobaadka iyo qabowga. Tamaandho "midba mid", wax yar ka yar. Si taxadar leh u dulqaadan kara gaadiidka oo la dhigo waqti dheer.
"Geesiga Dambiga" - Beelaha cajiibka ah, siinaya miraha waaweyn, halkan magaca. Tamaandho waa casaan midab leh oo midab leh, qurux badan oo sonkor leh dhadhan. Miraha cimilada, xitaa raaxo la'aan noocyo badan oo kale. Goosashada isku mid ah ee xagaaga qallalan iyo qabow.
"Miro qallalan" - midhaha miisaankiisu yahay ilaa 600 g oo leh dhadhan cajiib ah. Awood u yeelo inuu midho u dhalo xaalad xun.
"Crimson Heart" - Miraha waxaa loo qaabeeyey sida wadnaha, halkaasoo magaca noocyada kala duwan ay ka yimaadeen. Cabbirka miro waa celcelis, laakiin dhadhanka waa mid aad u fiican.
"Mucjiso raspberry" - taxane ah oo noocyo ah oo helay sumcaddii weyn ma aha oo kaliya beerta, laakiin sidoo kale ka mid ah macaamiisha. Bacriminta waxaa si firfircoon loo isticmaalaa beerashada miisaaniyad warshadeed.
Ma taqaanaa? Qarnigii 17aad, Britain waxay rumaysnayd in yaanyada ay ahaayeen miraha sunta ah. Waxay socotay illaa qarnigii 18aad, halka yaanyada lagu darin cuntooyinka ingiriiska ah ee badeecadda ugu muhiimsan.
Qodobbada muhiimka ah ee beerto yaanyo "Crimson Miracle"
Tamaandhada "mucjiso raspberry" ayaa ah mid ka soo jeeda shuruudo sii kordhaysa, laakiin si ay duurka u noqoto mid sare iyo midhaha waaweyn, farsamada beeraha waa in la soo saaraa heer sare.
Goorta ay ku beeran karaan abuurka
Seeds of yaanyada "Crimson Miracle" lagu beeray aqalka dhirta lagu koriyo, oo laga yaabo in laga bilaabo bartamihii bishii Febraayo - horraantii Maarso. Haddii aad qorsheyneyso inaad isla markiiba degto dhul furan, waa inaad sugto dhowr asbuuc oo dheeraad ah, maaddaama hanjabaadda kuugu soo noqoto barafka waa in laga fogaadaa. Waa lagama-maarmaan in la qaato weel yar oo aan ka badnayn 20 miraha oo lagu beeray mid kasta.
Diyaarinta substrate iyo nidaamka abuurka
Tiknoolojiga beeraha ee yaanyada sii kordhaya "Crimson Miracle" ayaa bixiya degitaanka gobol kasta oo dalka ka mid ah. Diyaarso dhulka beeritaanka waa in uu ka badan yahay dayrta. Waxaad taas ku samayn kartaa adiga ama alaabooyinkaaga diyaarka ah ee la diyaariyay ee dukaamada khaaska ah ama suuqa. Isku qas ciid, ciid iyo humus 1: 1: 1 saamiga oo buuxi weelasha lagu beerayo isku dar ah. Waxaad isticmaali kartaa dhalooyin caadi ah oo qoorta la gooyey.
Waa muhiim! Biyaha carrada leh xal daciif ah manganese ka hor beerashada yaanyada.
Ku daawee abuurka leh 1% oo ah "Baikal EM-1" ama "Ecosila". Ka dib markaa, ku dar dhalashada 20 miraha dhalo kasta. Qaado sanduuq madow 6-7 cm oo dheer. Si fiican u qoyso ciidda iyo buuxi suxuunta, adoo ka tagaya 2 cm oo ka soo jeeda geeska, iskudar carrada, ku celceli haddii loo baahdo, oo ku faafi miraha fogaan ah 1 × 1 cm. Ku dabool weelka dhalada ama filimada oo ku rid kuleylka.
Ma taqaanaa? Inkasta oo dhammaan sifooyinka wanaagsan ee tamaandhada, boqolkiiba yaryar ee runta ah ee bayaankan ay ku dhacaan cudurku weli waa la joogaa. Tamaandhada ka mid ah qoyska dhirta ay ka kooban yihiin solanine ee ka kooban. Tirada waxay kuxirantahay nooca gaarka ah waxayna ku xiran tahay caleemaha iyo afkoda. Sidaa darteed, marka daryeesho yaanyada, ka ilaali gacmahaaga. Juice ee caleemaha, haddii ay ku dhacdo maqaarka, waxay sababi kartaa dareen-celinta xasaasiyadeed ee qaabka cuncunka iyo xitaa kororka heerkulka. Waxay ku xiran tahay falcelinta shakhsiga ee jidhka bini'aadamka. Miraha yaanyada kuma jiraan alkaloids, sidaa daraadeed ma aha oo kaliya si dhib leh, laakiin sidoo kale cajiib ah faa'iido leh.
Koraaya geedo yaanyo "Crimson Miracle": xannaaneyn iyo kuwo kale
Yaanyo "Mucjiso raspberry" ayaa lagu kori karaa gobol kasta oo dalka ka mid ah. Marka xigta, waxaad baran doontaa sida si habboon loo wajaho geedo, si aad u heli karto miraha aad u dhadhan fiican leh berrin bannaan.
Xaaladaha geedo sii kordhaya
Koraaya geedo "Crimson Miracle", Isku day inaad abuurto shuruudaha lagama maarmaanka u ah geedo:
xaddiyo badan oo iftiin ah: waxaa lagugula talinayaa in daaqada lagu xiro dariishadaha xannibaadda dhinaca koonfureed. Daaqada waa in aan loo dul marin geedaha. Haddii aysan jirin iftiin dabiici ah, nalal iftiin macquul ah waa in la diyaariyaa;
qoyaan badan: u baahan tahay inaad ku buufiso geedo laba jeer maalintii oo leh humidifiers;
Heerkulka ugu fiican - galabtii 18-25 ° C, habeenkii - 12-15 ° C.
Marka caleemaha koowaad ay muuqdaan, ka saar jajabka daciifka ah iyo qaabdhismeedka. Sidaa daraadeed toddobaad kasta ha la socdo kuwa faaqidaad leh. Ugu dambeyntii waa inaad haysataa ilaa 10 dhir. Nidaamkani kuma lug lahaansho yaanyo.
Caleemaha hore ee buuxa ee geedo yaanyo waxay muuqdaan toddobaad ama 10 maalmood. Da'da this, haddii miraha lagu beeray mid aad u dhow oo ku jira hal weel yar, waxaa ka wanaagsan inaad soo qaado geedo ee koobab kala duwan. Tani waa in loo sameeyaa si taxadar leh sida ugu macquulsan oo waa in lagu beeraa oo keliya oo kaliya dhulka hoostiisa ee xididada. Beeraha qaar ayaa isku raacsan in ay lagama maarmaan tahay in la xoqo xididka asaasiga ah, laakiin tan laguma talin karo, sida xididdada kiis kasta oo waxyeello u geysan kara. Ku xoqidda ilaa saddex meelood meel ka mid ah xididada u horseedaya dib u dhac ku yimaada horumarinta geedo muddo hal toddobaad ah.
Qalinka ugu horeeya waxaa lagu sameeyaa koobab yar oo 200 ml ah.
2-3 toddobaad ka dib, geedo ku ridi kartaa mar labaad - in dheriyo dheeraad ah. Haddii miraha hore loo beeray weelal shakhsi (koobab, cajalado), ka dibna beerka ayaa noqon doona kii ugu horreeyey. Laguma talin in la isticmaalo dheriga ka yar 0.5-1 litir.
Geedo waa in la waraabiyaa toddobaadle. Da'da geedo, oo loo baahan yahay in lagu beeray dhul furan, waxay ku xiran tahay cimilada, noocyada ciidda, dabeecadaha shaqsiga ah ee kala duwan. Isla markiiba, waxaan ognahay in geedo in lagu beeray dhulka u furan waa in la demiyaa, iyo tan waa in la sameeyaa laba toddobaad ka hor qaliinka. Ugu horeyn, geedo loo qoondeeyay waa in lagu tagaa dibedda dhowr saacadood markii aan dabayl lahayn oo qorraxdu ay dhalaalayso. Ka dib markii loo baahdo in la kordhiyo wakhtiga lagu qaato hawada cusub.
Dhamaadka xilligaas waxaa suura gal ah in laga tago geedo dhan maalintii. Inta lagu jiro waqtigan, si buuxda ayaa loo xoojin doonaa, una guuri doonaa meel cusub oo iyaga ka mid ah ma yeelan doonaan walaac badan. Waqtiga transplanting galay dhulka u furan, u diyaargaroob si ay u xirashada geedo dhakhso sii kordhaya. "Mucjisada Dambiga" waa mid ka dhalanaysa wax soo saarka badan, iyo darnaanta miro ayaa si fudud u jebin karta geedka.
Waa muhiim! Khubarada waxay ku talinayaan yaanyada sii kordhaya ee aan ka badnayn laba caws.
Si aad "Mirpberry Miracle" ee aad ku heli lahayd kobcin iyo si hodanka ah, hodanka ah degitaanka waa in la sameeyaa iyadoo loo eegayo qaabka soo socda:
Ku qodo daloolka qoto dheer ee xayndaab maqaayad.
Qeybta hoose, gelin adag oo ah Bacriminta macdanta, compost ama humus. Isku qas dhamaan waxyaabaha maaddada leh kubbadda dhulka iyo ku shub inta badan.
Iska ilaali salka taageerada.
Ku rid geedo hore u waraabiyey daloolka iyo kula saydhaa ciidda.
Si tartiib ah hoos ugu cadaadi carrada agagaarka yaanyada, kaliya ka taxaddar inaadan waxyeeleynin xididdada dhirta.
Markale mar kale, maydh si aad u badan iyo xir duurka.
Ha ku dhibin dhirta muddo toddobaad ah. Sidaa darteed waxay u fiican yihiin oo ay qaataan xidid. Bilowga Maajo, geedo lagu beeray karo lagu koriyo. Goobta waa in si fiican u iftiin leh oo leh ciid wanaagsan oo bacrin ah oo u baahan in la waraabiyo xal manganese ah oo daciif ah. Ku dheji godadka xayndaabyada xayawaanka ah ee ka baxsan midba midka kale 60 cm Add 5 g nitrophoska si kasta oo wanaagsan, qaso dhulka oo ku shub inta badan. Qalabaynta abuur leh clod dhuleed si ay caleemaha ugu horeysa ku dhowaad dhulka. Iskujir oo leh isku dar ah peat, compost iyo ciid. Next, gali a peg iyo xir oo geedka. Shanta maalmood ee ugu horreeya ka dib markii ay beerto dhirta ha ku waraabin, ha qaataan xididka.
Ma taqaanaa? Legend wuxuu leeyahay in Boqorka Faransiiska Louis ku amray in uu quudiyo yaanyo mid ka mid ah marquis, kaasoo lagu xukumay dhimasho waxaana lagu hayaa Bastille. Boqortooyada waxay kalsooni ku qabtey in yaanyo ay dili doonaan maxaabiista xitaa ka hor inta aan la bilaabin xukunka xukunka. Hal bil ka dib, Marquis ma aha oo keliya badbaaday, laakiin wuxuu bilaabay inuu u fiicnaado, oo uu caafimaad dareemo. Intaa waxaa dheer in cuntada xabsiyada, ayuu maalin walba helay yaanyo cusub oo casiir leh oo ku jira mugga weyn. Boqorku aad buu u yaabay oo wuxuu cafiyey Marquis.
Sida loo daryeelo yaanyada "Crimson Miracle"
Goosashada wanaagsan, iyo sidoo kale macaan aad u macaan iyo jidh ahaaneed ee miraha, waxaa la heli karaa oo kaliya haddii beerista yaanyada "Mirpberry Miracle" ay ku dhici doontaa iyada oo la raacayo dhammaan sharciyada agrotechnical.
Inta lagu jiro xilliga fruiting, yaanyada waxay isticmaalaan qadar badan oo qoyaan ka soo ciidda. Celceliska heerka dareeraha maalinlaha waa 3.2 l / sq.m. Biyaha yaanyada oo keliya marka cimiladu qorraxdu jirto subaxa, haddii ay ku koraan aqalka dhirta lagu koriyo, iyo fiidkii - haddii uu bannaanka u furan yahay. Heerkulka biyaha waa in uu ahaado heerkulka qolka, taas oo ah, aan ka yarayn 20 ° C. Well waxay ku taliyeen duurka waraabka waraabka ee tamaandhada, ku qalabaysan qaab qaab nidaam ah. Ka dib kasta waraabinta waa in la dabciyo dusha sare ee ciidda. Sidaas ayaad ku biirineysaa kordhiyaan heerarka aeration.
Cunto dhirta waxay noqon kartaa xalka granules superphosphate qalalan. Waxaad ku bacrimin kartaa digada, qoryaha alwaax, humus, peat iyo diyaar gareyn adag. Nafaqada kordhaysa waxay u baahan tahay dhirta inta lagu jiro muddada dhaxanta. Podkorm weli waa la samayn karaa bacriminta gaarka ah si gaar ah loogu talagalay yaanyada ama by humus galay wareega jir ah ee baadiyaha kasta oo soo raacay by soo gelaya dhulka.
Ciidda ka yar duurka ee yaanyada waa in had iyo jeer waa dabacsan yihiin. Ugu yaraan laba jeer bishiiba waxaad u baahan tahay inaad dabciso xakamaynta, adoo isku daraya geedi socodka. Toddobaadyada ugu horreeya ka dib markii la beero, waa lagama maarmaan in la daboolo qoto dheer oo ah 12 cm, ka dibna, si aan u waxyeeleynin xididada, 8 cm.Haddii ciidda ay culus tahay, markaa waxaad aadi kartaa qoto dheer, laakiin kaliya meelahaas in nidaamka xididka yaanyo aan weli la gelin. Waxaa faa'iido leh in mulch ciidda, kaas oo hagaajiya heerkulka iyo qoyaanka ee ciidda.
Xusuusnow in si ka badan si fiican u "Mirpberry Miracle" helo daryeel, si ka fiican iyo ka wanaagsan goosashada ee yaanyada casiir noqon doonaa. Marka duurka ee yaanyada ay noqdaan kuwo ka sarreeya oo ballaadhan, si loo daboolo waa in lagu daraa wax badan oo dhiiqo. Waxay ka qayb qaadataa kuleylka nidaamka xididka, marka laga reebo ma ogola inay uur yeelato, laakiin waxay sidoo kale ka qayb qaadataa dhalidda xididdada macquulka ah. Tani, sababtoo ah, Bisaylka miro wuxuu u dhacaa si dhakhso badan. Hilling xiga waa in lagu fuliyaa laba toddobaad gudahood, oo kaliya carrada qoyan. Waxay noqon doontaa mid waxtar leh oo lagu daro ciidda humus more.
Ma taqaanaa? Dhirta yaryar waxay leedahay hal hanti dabiici oo qaas ah - waxay ka saari kartaa chlorine timaha qofka. Gaar ahaan macluumaadkaani waxay noqon doontaa mid waxtar leh oo la isku qurxiyo. Tusaale ahaan, haddii uu soo booqdo barkad, timo biyo ah oo laga helay biyo la helay, midab cagaaran, waa inaadan argagaxin. Samee wax sida maaskaro timo ah oo ka soo baxa yaanyo, iyo quruxda timahaaga ayaa la soo celin doonaa.
"Crimson Miracle": faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada taxanaha ah
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee Toobiyeyaasha "Mucjiso raspberry" waa la kala saari karaa:
dhadhan cajiib ah, gaadiid iyo tayada alaabada;
yaanyada ma burburin marka ay bislaadaan;
Taxanahan ayaa difaacaya dabaylo goor dambe;
Dhirta sare: laga bilaabo hal baadiyaha waxaad ka qaadan kartaa ilaa 5 kg of yaanyo cajiinka ah oo cajiib ah.
Waxaa jira ku dhawaad ​​wax yar oo yaanyo ah oo ku yaala Mainin Miracle, marka laga reebo in miraha dambe ay koraan ugu yar. Taasi waa, xajmigoodu waxay hoos u dhigi doontaa mid kasta oo soo socda. Laakiin tani waxa loo rogi karaa in lagu daro, maxaa yeelay waxa yaanyo yaryar qasacadaysan oo yar yar!
"Mucjiso raspberry" - noocyo kala duwan oo yaanyo ah. Mid ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay ilaalinta muddada-dheer ee biqilka abuur. Haddii noocyo kale ay hoos u dhacaan sanadaha, duurka "Miracle" waxay midho dhalin doontaa ka dib 15 sanno oo kaydka abuur ah.